Seife, VOA, BBC fi Hogganoota ABO sababa Covid-19 dabre – Ayyaantuu
HomeEnglishSeife, VOA, BBC fi Hogganoota ABO sababa Covid-19 dabre
Beellamni mana murtii hogganoota ABO sababa Covid-19 Jimaatatti dabre
Ji’a tokkoon dura too’annoo jala kan oolan hogganoonni fi miseensonni Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) Kamisa Hagayya 06 waaree booda mana murtii aanaa magaalaa Sulultaattii dhihaachuuf beellamni qabamee turuu abukaatonni BBC’tti himan.
Namoonni mana murtiitti dhiyaachuuf turan Dr. Shuggux Galataa, Obbo Lammii Beenyaa, Obbo Mikaa’el Booran, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Obbo Daawud Abdataa, Aadde Caaltuu Taakkalaa fi kanneen birooti jedhu abokaatoota isaanii keessaa tokko Obbo Tuulii Baayisaa.
“Har’a mana murtiitti ni dhihaatu jennee eegaa turrus sababa koronaavaayirasiitiin guyyaa boruu (Jimaata Hagayya 07, 2020) waaree boodatti akka darbe nutti himameera” jedhan.
“Ganamarraa qabnee abukaatonnii fi maatiin hanga sa’aatii 11’tti achi teenyee eegaa oolle.”
“Gaafa dhadhacha gaafannu, mooraa isaan itti hidhamanii jiran keessatti poolisoonni koronaavaayirasiidhaan shakkaman waan jiraniif qorannaa koronaarra waan jiraniif ko’oommatanii dhiheessuu dadhabne jedhanii nutti himan” jedhan.
Hogganaan hospitaala Eekkaa Kotabee dhimma Obbo Dajaneen mana murtiitti waamaman
Qorannoon Obbo Baqqalaa Garbaa goolabamee ‘galmeen qorannoo duraa’ baname
Kan koronaavaayirasiidhaan shakkame namoota hidhaman osoo hin taane poolisoota ta’uus odeefannoon akka itti himame Obbo Tuuliin ni dubbatu.
“Mootummaan humnaa fi bajata waan qabuuf poolisoota dabalataa dhiheessuun dhadhacharratti akka isaan dhihaatan gochuu inuma danda’u ture” jedhan.
Namoonni kunneen waxabajjii 15 irraa eegalee kan too’ataman yoo ta’u ji’a tokkoo oliif osoo mana murtiitti hin dhiyaatiin too’annaa jala turuus eeran.
“Ji’a tokko darbe kana bakka isaan jiran namni qabatamaan beeku hin turre. Garuu akka odeefannoo jiruutti koomishinii poolisii Oromiyaa akka jirantu himama malee maatiinis ta’e nuti dubbisnee hin beeknu” jedhan.
Boru waaree booda mana murtii aanaa Magaala Sulultaatti akka dhihaachuuf beellamames Obbo Tuuliin BBC’tti himaniiru.
Namooti ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa booda hidhaman sababa koronaavaayirasiitiin mana murtiitti dhiyaachuu yoo hafan kun kan jalqabaa miti.
Barreessaa Itti Aanaa KFO kan ta’an Obbo Dajanee Xaafaa hospitaala Covid-19 itti yaalamu Eekkaa Kotabee galfamanii beellama mana murtiirraa hafanii turan.
Abukaatonni, maatii fi rogeeyyiin mootummaan dhukkuba Covid-19 siyaasaaf itti dhimma bahaa jira jechuun qeequ.
Murtii fi Kutannoolee Kora Addaa ABO Waxabajjii 28, 2019 Addi Bilisummaa Oromoo waggoota 43 booda…
Eutelsat 8 West B new DTH platform in Ethiopia